I-Villa Kampos ukushona kwelanga nokubukeka kolwandle - I-Airbnb
I-Villa Kampos ukushona kwelanga nokubukeka kolwandle
παρος, κυκλαδον, i-Greece
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Lazaros
Antiparos >ukubuka kolwandle
< indawo yokubhukuda
I-Villa Kampos ese-Voutakos, indawo enhle futhi ekahle kakhulu esiqhingini sase-Paros. Enye inzuzo ekhethekile yendlu ukuthi ukuhambahamba imizuzu engu-10 ukusuka emabhishi. Izinzuzo ezengeziwe zabathandi be-kite ukuthi amabanga ukusuka esikhungweni se-kite uhamba ngemizuzu engu-5 kuphela. I-Villa ithatha abantu abangu-8, inamagumbi okulala angu-3, amagumbi okugezela angu-2, kanye nohlelo oluvulekile lwekhishi elinakho konke okudingekayo.
Eduzane nendlu ngebanga lemizuzu engu-2 ungathola imakethe encane, ebangeni elingu-2,5km kukhona idolobhana lezinhlanzi lendabuko elibizwa ngokuthi yi-Aliki futhi lapho ungajabulela inhlanzi ehlanzekile, ikhofi nesidlo sasekuseni eduze nolwandle. Ngaphakathi kuka-2022 siqedile ukuvuselela kwethu okuhambisana ne-pool yethu entsha yokubhukuda phambi kwendlu.
Itheku lase-Pounta (kuya e-Antiparos):3km
Isikhumulo sezindiza: 3Km
200M Aliki: 2,5km I-Super Market of Aliki:2km
Ukuthula nokushona kwelanga
Inombolo yepholisi: 1175Κ92001146301
Hlola ezinye izinketho ezise- παρος namaphethelo